နေ့များ… | အမှတ်တမဲ့.....နှင်း....
August 12, 2009 in စကားပြေတချို့ | Tags: နေ့များ
အဝေးဆီကို ငေးမျှော်ကြည့်လိုက်ရင် မြူခိုးတွေ။ အ၀ိဇ္ဖာလို ဘာကိုမှမမြင်နိုင်လောက် အောင် မှုန်မှိုင်းလို့။ ပင်လယ်ရေပြင်မျက်နှာပြင်ထက်ပေ(၄၀၀၀)ကျော်မြင့်တဲ့ ဒေသဆိုတော့ တိုက်ခတ်နေတဲ့လေပြည်ဟာအသက်မဲ့အေးစက်လို့။ တောင်ပေါ်လမ်းကျဉ်းလေးတွေဟာ မိုးမြူတွေထဲတိတ်ဆိတ်ပျောက်ကွယ်နေကြတယ်။ နေ့တွေ၊နေ့တွေဟာတစ်စွန်းတစ်စနေရောင်ကိုမမြင်ရဘဲ တငွေ့ငွေ့ကုန်ဆုံးနေကြတယ်။ ရေပွင့်ရေပေါက်တွေ စွတ်စိုလေးလံနေတဲ့သစ်မြစိမ်း ရွက်တွေ၊မြူတွေကြားမှာ ပျင်းရိမြုပ်နစ်နေတဲ့အဖြူရောင်သစ်ပင်တွေ၊ အေးရှစိမ့်မြတဲ့ ရာသီဥတုနဲ့ဝေးကွာခြင်းရဲ့ပူလောင်ပြင်းပြသော မီးလျှံတွေ။ ပြောကြစတမ်းဆိုရင်နေ့စဉ်ရှုခင်းဟာ ထူးခြား ပြောင်းလဲမှုသိပ်မရှိလှဘူး။ ထပ်ပြန်ကလဲလဲမက်နေရတဲ့ဆောင်းတွင်းအိပ်မက်တစ်ခုလို အရာရာ ဟာ ခေါက်ရိုးကျိုးလို့။အသားကျနသေသပ်လို့။
တစ်ခါတလေ နေရောင်ကို တမ်းတမ်းတတမျှော်လင့်မိတယ်။ နွေးထွေးနူးညံ့တဲ့နေရောင် ခြည်နဲ့ မြို့ပြရဲ့ပလက်ဖောင်းတစ်ခုပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လွတ်လပ်ချင်မိတယ်။ တကယ်ဆို မျှော် လင့်ချက်ဟာမျှော်လင့်ချက်ဘဲလား။ တကယ်ဖြစ်မလာနိုင်တဲ့ တစ်စုံတစ်ရာကိုမျှော်လင့်မိုက်မဲ နေမိတာလား။ အတွေးကိုရောက်တဲ့နေရာမှာရပ်တန့်လိုက်ချင်တယ်။ လျှောက်နေတဲ့လမ်းဟာ တစ်နေရာရာမှာရပ်တန့်ပြီးဆုံးသွားသလိုမျိုး အရာရာကို မေ့ပျောက်လိုက်ချင်တယ်။ မနက်ဖြန်နေသာမှာလား။ တိမ်ကင်းစင်တဲ့ ကောင်းကင်ကို ခဏဖြစ်ဖြစ်မော့ကြည့်ခွင့်ရမှာလား။ ရာသီဥတု လင်းမြကြည်လင်နေတဲ့ရှားရှားပါးပါးနေ့မျိုးဆိုရင်တော့ အဝေးရှုခင်းတွေကို ငေးရီလှမ်းမြင်ခွင့်ရတယ်။ ဟိုးအဝေးမှာ ညီညာပြန့်ပြူးတဲ့ မြေပြန့်လွင်ပြင် . . .မြူခိုးရိပ်ရိပ်ပြာပြာနောက်ခံနဲ့။ အဲဒီ မြေပြန့်လွင်ပြင်ရဲ့ ဒီဘက်မှာတောင်ခိုးအထပ်ထပ်နဲ့ တောင်စဉ်တန်းတွေ။ တောင်ခိုးနဲ့တိမ်ဟာထိစပ်ယှက်လိမ့်လို့။ မောပန်းတယ်။ နာကျင်မိတယ်။ လည်ချောင်းတွေကွဲအက်သွားတဲ့အထိ အော်ဟစ်လွတ်လပ်လိုက်ချင်တယ်။ ငါ့အသံဟာတောင်တန်းတွေရှိရာ ပဲ့တင်ပြန်လာနိုင်ပါ့မ လား။
လူအဖြစ်မှာ တတ်နိုင်သမျှ အရာရာကို မေ့လျော့ထားခဲ့တယ်။ တက်နိုင်သမျှမြွေတစ် ကောင်လို တိတ်ဆိတ်ယဉ်ကျေးစွာ ရစ်ခွေရှင်သန်နေခဲ့တယ်။ တစ်ခါတလေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆူညံအော်ဟစ်လို့ တစ်ခါတလေ အခန်းရဲ့ထောင့်ကျဉ်းတစ်ခုမှာတစ်ယောက်တည်း မွန်းကျပ် နာကျင်လို့။ အဲဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဘယ်သူနဲ့မှလည်း စကားမပြောချင်။ ဘယ်လိုလူမှုဆက်ဆံရေး မျိုးနဲ့မှလည်းအလိုက်အထိုက်မနေချင်။ အဲဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဆိုရင် မွန်းကျပ်ပိတ်မိနေတဲ့လိပ်ပြာ တစ်ကောင်ရဲ့ နိမိတ်ပုံကိုသာသွေးရူးသွေးတန်းခံစားမြင်ယောင်နေမိတာ။ လိပ်ပြာဟာ အခန်းရဲ့ နေရာအနှံ့မွန်းကျပ်ပျံသန်းနေခဲ့တာ။ သူ့မှာ ထွက်ပေါက်မရှိ။ စေးထန်းလေးလံလို့။မွန်းကျပ် ပိတ်ဆို့လို့။ အခန်းရဲ့ လေးဖက်လေးတန် နံရံတွေကိုသူ့တောင်ပံနုနုလေးနဲ့ တဖျန်းဖျန်းကွဲ အောင် ရိုက်ခတ်ပျံသန်းနေခဲ့တာ။တကယ်ဆို လူအဖြစ်ဆိုတာ ရေပွက်ပမာလား။ နေ့ရှိသရွေ့ ခေါ်ဆိုနေတဲ့တယ်လီဖုန်းတွေဟာ ဆက်သ်ွယမှုဧရိယာပြင်ပလား။အခန်းရဲ့ပြတင်းတံခါးကို ပိတ်ထားတယ်။ ပြတင်းတံခါးကိုဖွင့်လိုက်ရင်မြူငွေ့တွေ အဆုပ် လိုက် အမြွှာလိုက် လွင့်စင်လာတာပဲ။ အခန်းဟာခဏချင်းစွတ်စိုထိုင်းမှိုင်းသွားတာပဲ။ တောင်ကြောတစ်လျှောက်လူသွားလမ်းကျဉ်းကျဉ်းလေးတွေမှာ လျှောက်ရတဲ့အခါ စိုထိုင်းစ များပြားတဲ့လေပြည်မှာ ဆံပင်တွေခဏချင်းပဲ စိုရွှဲစေးကပ်သွားလေ့ရှိတယ။မြူဝတ်မြူခိုးတွေကြားမှာ အရာရာဟာ အဖြူအမည်းရုပ်ရှင်လို။တကယ့်အဖြစ်အပျက်လား အိပ်မက်လား၊ေ၀၀ါးချင်ချင် ဖြစ်ရတာ။ တစ်ခါတလေရောက်တတ်ရာရာတွေးမိ၊ စိတ်အချဉ်ပေါက်ရွဲ့စောင်းမိတယ်။ ဒီလို နေရာမျိုးမှာဆယ်စုနှစ်တစ်နှစ်လောက်သာနေရမယ်ဆိုရင် အလိုအပ်ဆုံးအရာဟာ မီးလင်းဖိုတစ်ခုထက်စာရင် မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်မှာပဲ။ အနုပညာဆီမပါ ပြားမပါကဗျာစမ်းသပ်မှုတစ်ခု ထက်စာရင် အရက်ပြင်းပြင်းတစ်ခွက်က ပိုအဆင်ပြေမှာပဲ။
နေ့ရှိသရွေ့ ကဗျာတွေအများကြီး တွေးဖြစ်၊ရေးဖြစ်တယ်။ နေ့ရှိသရွေ့ အာရုံကိုအနု ပညာမှော်ရုံဆီမှာ ကူးလူးချိတ်ဆက်ထားတယ်။ တကယ်ဆို လူအဖြစ်ကတစ်နေရာ၊စိတ်ကူး စိတ် သန်းကတစ်နေရာမှာ။ကဗျာအကြောင်းတွေးလိုက်၊သူငယ်ချင်းကဗျာဆရာကဆီက စာကိုမျှော် လိုက်၊တွေ့တွေ့သမျှ စာအုပ်တွေကို ဆွဲဖက်လိုက်နဲ့ နေ့တွေအချိန်တွေ၊ကုန်ဆုံးနေရတာ။ တကယ်ဆို ကဗျာအနုပညာဟာ ဒီဘ၀အတွက် အခြားသော ကမ္ဘာလား။ရောက်ရှိမလာသေးတဲ့ မနက်ဖြန်ပေါင်းများစွာအတွက်စိမ်းလန်းသောမီး၊စိမ်းလန်းသော တေးသံလား။
ဟော . . . မိုးက ရုတ်တရက်ရွာလာပြီ။ မြင်ကွင်းမှာ မိုးစက်မိုးပေါက်တွေကရုပ်ချည်းနေရာ ယူခဲ့ပြီ။ မိုးရေစ်တွေဟာ မိုးနဲပအတူပါလာတဲ့လေမှာယိမ်းနွဲ့လွင့်ပါလို့။ ခေါင်မိုးပေါ်ရေကျနေတဲ့ အသံက တဗြုန်းဗြုန်း .. .တဗျင်းဗျင်းနဲ့။ မိုးရွာထဲကို တစ်ဟုန်ထိုးပြေးထွက်သွားလိုက်ရင် ကောင်းမလား။ ငယ်ငယ်တုန်းကလု . . .။ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာနဲ့။၀တ်ထားတဲ့အ၀တ်အစားတွေအားလုံး မိုးရေထဲမှာ ရွှဲရွှဲစိုကုန်မှာပဲ။ဆံပင်တွေကတဆင့် မျက်နှာပေါ်စီးကျလာတဲ့ မိုးစက်မိုးပေါက်တွေ ဟာအေးမြလန်းဆန်းနေမှာပဲ။ မိုးကြောင့် မျက်လုံးထဲကမြင်ကွင်းဟာရုပ်ချည်းပြောင်းလဲသွားခဲ့ ပြီ။လျှပ်စီးလျှပ်ရောင်တ၀င်းဝင်းနဲ့ . . .။ သိပ်သည်းပြင်းထန်တဲ့မိုးဟာအရာရာကို ၀ိုးတ၀ါးကမ္ဘာ ထဲဆွဲခေါ်လို့။ ဒီဒေသရဲ့ ရာသီဥတုကတအားအပြောင်းအလဲမြန်တာပဲ။ ခဏချင်းပဲ ရာသီဥတု ကြည်လင်လိုက်၊ခဏချင်းပဲမြူခိုးတွေနဲ့ေ၀၀ါးသွားလိုက်၊ခဏချင်းပဲ မိုးပွင့်မိုးစက်တွေ ပိတ်ဆို့ပြို ဆင်းလာလိုက်နဲပ။ စိတ်အပြောင်းအလဲမြန်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်လို၊အချိန်ခန့်မှန်းဖို့ရာ ခက်ခဲ လွန်းတဲ့နာရီပျက်တစ်လုံးလို။ ရွာနေတဲ့မိုးမှာ ရေစီးကြောင်းငယ်တွေ ခွဲဖြာစီးဆင်းလို့။ ရေစီး ကြောင်းတွေဟာကံကြမ္မာလို မြင့်ရာကနေ နိမ့်ရာကိုစီးဝင်လို့။ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အအေးဓါတ်က ပိုမိုသိသာလွန်ကဲလာခဲ့ပြီ။ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ်မျှော်မှန်း တမ်းတဖို့ရာ ရှစ်ရပ်ခွင်ဟာ မှုန်မှိုင်းရီဝေလို့။အထီးကျန်စိတ်ဟာ မမြင်ရတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါး တစ်ကောင်လိုအတွေးကိုစီးဝင်ပူးကပ်လို့။ မမြင်ရတဲ့နံရံတွေကို အာရုံမှာခံစားသိ၊သိနေမိတယ်။ ဒီလိုအချိန် ရေဒီယိုခလုတ်ဆွဲဖွင့်လိုက်ရင်နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ် စိတ်သက်သာရာ ရမလား။ ဒီလို အချိန်ကိုယ့်ကိုကိုယ့်ဂီတသံတစ်ခုထဲမှာ ဆွဲနှစ်လိုက်ရင် မာတင်းနေတဲ့အာရုံကြောတွေဟာပျော့ပျောင်းသွားလေမလား။အဲဒီစိတ်ကူးစိတ်သန်းတိုင်းဟာ တွေဝေလို့၊ဒွိဟဖြစ်လို့၊အရာရာဟာ မှုန်မှိုင်းနာကျင်လို့ . ..။ နေ့တွေ။ ။
idea magazine; 2009 ,july
အောင်ပိုင်စိုးဆီက စာက်ိုမျှော်ရင်း ကုန်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ နေ့တွေအကြောင်းပါ။ နေရောင်ကို တစ်ရက်မှမမြင်ခဲ့ရတာ ဒီတစ်ခါက ပထမဆုံးပါပဲ။ နောက်ဆုံးလည်းဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။
အမ ဘလော့မှာ ဒီဘလော့လေးကို မိတ်ဆက်လုပ်မလို့..
စနေတနင်္ဂနွေတော့ အမ တင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..။
မင်းနေကောင်းလား ကောင်းကြီးကို အမက ဦးညွှတ်လိုက်ပါတယ်လို့..ပြောပေးပါနော်..။
စားရေးကောင်းလိုက်တာကွာ…… စာသားတွေက ပြောချင်တာ တွေကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်စေတယ် ….. စာတွေအား ကောင်းတယ် သယ်ချင်းဆက်လုပ် ကဗျာတော့ မဝေဖန်တတ်ဘူး စာ တွေအများကြီးရေးနိုင်ပါစေ အသစ်တင်တိုင်းလာဖတ်မယ် တစ်ခါတည်း Link သွားမယ် ………. (ရန်ကုန်သား)
သယ်ချင်း c box လေးထည့်ထားဦး အော်လို့ ရအောင် 😀
LeaveaReply to အိန္ဒြာ Cancel reply